#AI #Automation #DataTechnicalConsultant @GrowByData #Retails #Big #Better: #NewNepal #HamroParty हाम्रो पार्टी, बिप्लव जस्ता कायर जस्ले बन्दको #Nepalbandh नाममा डर र त्राश फैलाएर गरीव जनतालाई दुःख दी रा को छ तुरन्त देश द्रोहीको मुद्दा लगाएर जेल कोच्नु पर्छ भन्ने धारणा राख़्द छ। ए हुतिहारा ६०१ सांसदहरु किन कड़ा भंदा कड़ा सजाय दिने कानुन पास गर्दैनौ। तिमीहरुको काका चन्द भन्ने धूपौरे येतै घूमी रा छ। फ़ाइव स्टार होटेलमा बसेर रक्सी धोकदै होला चिकेन तंदूरी चपा र। अनि पंगु सरकारमा सम्मिलित पुलिस र सिपाही के गर्दै छन नी ?
#NewNepal #HamroParty हाम्रो पार्टी, बिप्लव जस्ता कायर जस्ले बन्दको #Nepalbandh नाममा डर र त्राश फैलाएर गरीव जनतालाई दुःख दी रा को छ तुरन्त देश द्रोहीको मुद्दा लगाएर जेल कोच्नु पर्छ भन्ने धारणा राख़्द छ। ए हुतिहारा ६०१ सांसदहरु किन कड़ा भंदा कड़ा सजाय दिने कानुन पास गर्दैनौ। तिमीहरुको काका चन्द भन्ने धूपौरे येतै घूमी रा छ। फ़ाइव स्टार होटेलमा बसेर रक्सी धोकदै होला चिकेन तंदूरी चपा र। अनि पंगु सरकारमा सम्मिलित पुलिस र सिपाही के गर्दै छन नी ?
Posted by Lava Kafle at 12:09 PM